Soosaarayaasha PCB-ka HDI | Shiinaha HDI PCB Factory & Shirkado
8 lakabka HDI PCB ee warshadaha amniga
Kani waa guddiga wareega 8 lakab ee warshadaha amniga. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.
Waxaa jira 6 nooc oo kala duwan ah looxyada HDI, iyada oo loo marayo vias laga bilaabo dusha sare ilaa dusha sare, vias la aasay iyo iyada oo loo marayo vias, laba ama in ka badan lakab HDI leh iyada oo loo marayo vias, substrate passive oo aan lahayn xiriir koronto, dhisme aan aasaas lahayn oo isticmaalaya lammaanaha lakabka iyo dhismayaasha kale ee dhismooyinka aasaasiga ah adoo adeegsanaya labo-labo lakab.
10 lakabka SARE CULUS SARE PCB
Kani waa guddiga wareega 10 ee wareegga warshadaha Telecom. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.
12 lakabka HDI PCB ee xisaabinta daruuraha
Kani waa guddiga wareegga wareegga 12 ee alaabada xisaabinta Cloud. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.
22 lakabka HDI PCB ee militariga & difaaca
Kani waa guddiga wareega 22 lakabka ee warshadaha amniga. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.
HDI guddiga Circuit nidaamka gundhig
Kani waa guddiga wareegga 10 lakabka ee nidaamka gundhigga. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.
HDI PCB oo leh geeska loogu talagalay Semiconductor
Kani waa guddiga wareega 4 lakab ee baaritaanka IC. Guddiyada HDI, mid ka mid ah teknoolojiyadda ugu koritaanka badan PCBs, ayaa hadda laga heli karaa Pandawill. Guddiyada HDI waxaa kujira fiisooyinka indhoolayaasha iyo / ama la aasay waxayna badanaa kujiraan microvias of .006 ama kayar dhexroor. Waxay leeyihiin cufnaanta wareegga wareegga oo ka badan looxyada wareegga dhaqameed.